Wiil Soomaali ah oo maxkamad lagu soo taagey Mareykanka ka dib dhac Bangi Video+Sawiro – SBC
Wiil Soomaali ah oo maxkamad lagu soo taagey Mareykanka ka dib dhac Bangi Video+Sawiro
Wiil Soomaali ah oo lagu eedeeyey in uu jabsadey bangi ku yaal wadanka Mareykanka uun ka dhacay ayaa la sheegay in lagu xukumay xabsi isla marka uu dhameystana xabsina la go’aaimiyey in dib loogu soo celiyo Soomaaliya oo loo soo tarxiilayo.
Booliiska Minneapolis ee wadanka Mareykanka ayaa ku sheegay wiilkan magaciisa Hassan Muse Farah waxaana la sheegay in uu jabsadey darbiga bangiga Fargo Bank maalinimadii Jimcada isagoo waraaq hanjabaad ah u qoray mid ka mid ah shaqaalaha isagoo ka dalbadey in uu iska soo wareejiyo lacag gaaraysa 33 kun oo doolar oo uu soo qorey, waxaana uu ku hanjabay in hadii aan lacagtaasi la siin uu bangiga qarxin doono.
Shaqaalaha ee fadhiyey qaybta lacag bixinta & qabashada ayaa Hassan u dhiibay 1805 (Kun sided boqol & shan doolar) oo uu xiligasi gacnata ku hayey.
Hassan ayaa markaasi ka dib waxaa soo qabtey Booliiska waxaana la horkeenay maxkamada degmada Hennepin County District Court, waxaana la sheegay in uu mudan karo xabsi iyadoo marka uu dhameystana dib loogu celinayo Soomaaliya.
Hassan oo 20 sano jir ah ayaa waxaa hada gacanta ku haya ciidamada booliiska gaar ahaan waaxda xabsiyada.
Link-ga Video-ga wiilkan.
Julaay 13, 2011 at 12:15 pm
Soomaalaay haddaan dibadii nimidna mawaxii wadankeena burbiyay baan wali wadnaa!!!!!!!!!!! Waa yaab bal ninkii aduunka nacay Aakhiro meeshuu gali lahaa hasii diyaarsado dabcan waa meel uusan meeluu ka aado haysan!!!!!!!